Fashion Archives - MYANMORE+
Fashion Wai Lin - September 28, 2020 0
အမျိုးသမီး လက်ကိုင်အိတ်တွေဟာ လှဖို့နဲ့အသုံးဝင်ဖို့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားနဲ့လိုက်ဖက်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိတ်တွေဝယ်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ကိုက်ညီအောင် လွယ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အိတ်ဘယ်လောက်လှလှ လွယ်ပုံစတိုင်မကျရင် ကြည့်မကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိတ်တွေလွယ်တဲ့အခါ သတိပြုသင့်တဲ့ ဆောင်ရန်၊ ​ရှောင်ရန်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကပ်ကြည့်ပါ အိတ်ဝယ်တဲ့အခါအများအားဖြင့် လွယ်ကြည့်ကြပါတယ်။ အကောင်းဆုံးဝယ်နည်းက အိတ်ဝယ်ရင် ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လွယ်ကြည့်တဲ့နည်းပါ။ ဒါမှ ကိုယ်နဲ့ လိုက်မယ့်အကောင်းဆုံးပုံစံကို...
Fashion myanmoreplus - August 26, 2020 0
“မြန်မာနိုင်ငံမှာချင်းပြည်နယ်ကဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းပြချက်က ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်မရှိလို့ပါပဲ။ ဈေးကွက်ထဲကချင်းအဝတ်အထည်တွေရဲ့ ၈၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်က ချင်းပြည်မှာချုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲ ကလေးနဲ့ဂန့်ဂေါလိုမြို့တွေကထွက်တာပါ။” ဒီအကြောင်းကိုပြောပြလာသူကတော့ Aidii Weaving House ရဲ့တည်ထောင်သူ Anna Biak Tha Mawi ဖြစ်ပါတယ်။ ဟားခါးမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ Anna ဟာ ၅နှစ်သမီးကတည်းကရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့မိခင်ဟာ ချင်းလူမျိုးအိမ်နီးနားချင်းတွေကတဆင့်အဝတ်အထည်နဲ့စောင်တွေဝယ်ယူခဲ့တဲ့အတွက် ချင်းရိုးရာလက်ရက်ကန်းပညာနဲ့ ငယ်စဉ်ကတည်းကရင်းနှီးနေခဲ့သူပါ။ သူမရဲ့အဖွား ၂ယောက်လုံးကလည်း ကျွမ်းကျင်တဲ့ရက်ကန်းသည်တွေဖြစ်ပြီး သဘာဝဆိုးဆေးတွေကိုသုံးပြီးအဝတ်အထည်တွေချုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြောပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး...
Fashion myanmoreplus - August 21, 2020 0
ပြိုင်ကားမောင်းခြင်းနဲ့နာရီကုမ္ပဏီတွေဟာ ရေနဲ့ငါးလိုရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော်နာရီကုမ္ပဏီတွေဟာ ပြိုင်ကားတွေရဲ့ဒီဇိုင်းကို inspire ယူပြီး ဇိမ်ခံနာရီအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီအထဲမှာ Rolex နဲ့ TAG Heuer တို့လိုအမှတ်တံဆိပ်တွေလည်းပါပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ပြိုင်ကားဒီဇိုင်းနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ ထိပ်တန်းဇိမ်ခံနာရီ ၁၅လုံးအကြောင်းပြောပြထားပါတယ်။ Source: watchtime Baume & Mercier Clifton Club Shelby Cobra Limited Edition ၂၀၁၇ခုနှစ်က Baume...
Fashion myanmoreplus - August 8, 2020 0
“အဝတ်အစားဒီဇိုင်းတွေဆွဲရတာ၊ လိုက်ဖက်မယ့်အထည်တွေကိုရွေးချယ်ရတာကျမရဲ့ဝါသနာတခုဖြစ်လာပါပြီ။ ပြည်တွင်းကလက်မှုပညာရှင်တွေကိုလည်းကူညီချင်တာနဲ့ Lilla ကိုစတင်တည်ထောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။” အခုလိုပြောလာသူကတော့ Lilla အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင် Julie ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်နဲ့ဆွီဒင်နွယ်ဖွား Julie ဟာ ၂၀၁၆ခုနှစ်က အာရှတခွင်ခရီးထွက်ရင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာသူပါ။ “မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရောက်ချင်းပဲ ဒီနိုင်ငံကိုချစ်မိသွားတာနဲ့ ဒီမှာပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ လက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတုန်း လက်ရက်ထည်တွေကိုလေ့လာမိရာကနေ ရိုးရာအထည်အလိပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားလာတာပါ” လို့ပြောပြပါတယ်။ သူမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ခါစကိုလုံချည်ချုပ်ဖို့အထည်တွေဝယ်ရင်း သူနေတဲ့လမ်းထဲကအင်္ကျီချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ သိကျွမ်းခဲ့တယ်။ သူ့ဆီမှာအင်္ကျီတွေအပ်ရင်းမြန်မာဝတ်စုံတွေစဝတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ “ကျမမြန်မာဝတ်စုံတွေဝတ်တာတွေ့ရဖန်များတော့ သူငယ်ချင်းတွေကဘယ်ကဝယ်တာလဲလို့မေးလာကြတယ်။ အဲ့ဒီကနေတဆင့် Lilla ကိုစတင်ဖို့စိတ်ကူးရခဲ့တာ။လက်မှုပညာရှင်တွေကိုလည်းတဘက်တလမ်းက...
Fashion Soe Thiha Htun - May 24, 2020 0
ကိုယ့်ကိုရော တခြားသူတွေကိုပါ Virus မကူးစက်‌နိုင်‌ေအာင်ကာကွယ်ဖို့ Face Mask ဝတ်ဆင်ရခြင်းကြောင့် ကိုယ့်ရုပ်သွင်ပြင်အတွက်တစ်ခုခုထိခိုက်သွားစေမယ်လို့ စိုးရိမ်ခဲ့မိဖူးလား? Coronavirus Pandemic ကြောင့် Face Mask တွေက လူတိုင်းရဲ့နေ့စဉ်အသုံးအ‌ေဆာင်ပစ္စည်းလိုဖြစ်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာ လူတချို့က‌ Face Mask ဝတ်ဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကူးအသစ်‌အဆန်း‌ေတွရလာကြပုံ‌ေပါ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အနုပညာသည်‌ေတွ၊ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတွေသာမက သာမန်လူအတော်များများကပါ Face Mask တွေကို...
၇ႀကိမ္​​ေျမာက္​ Myanmar International Fashion Week
Fashion myanmoreplus - December 25, 2019 0
၇ႀကိမ္​​ေျမာက္​ Myanmar International Fashion Week ကို The Central Boulevard Yangon မွာ ဒီဇင္​ဘာ ၂၀ရက္​​ေန႔က​ေန ၂၂ရက္​​ေန႔အထိက်င္​းပခဲ့ပါတယ္​။ Stars & Models Int'l Yangon ကိုတည္​​ေထာင္​သူ ဂြၽန္​လြင္​စီစဥ္​တဲ့ဒီပြဲဟာ ႏွစ္​စဥ္​က်င္​းပ​ေလ့႐ွိၿပီးျမန္​မာႏုိင္​ငံရဲ႕အႀကီးဆံုးဖက္​႐ွင္​႐ႈိးလို႔လည္​း​ေျပာလို႔ရပါတယ္​။ ​ေအဂ်င္​စီရဲ႕​ေမာ္​ဒယ္​​ေတြနဲ႔အဆင္​့အတန္​းျမင္​့ဖက္႐ွင္​ဒီဇိုင္​း​ေတြအျပင္​ နာမည္​ႀကီးအႏုပညာ႐ွင္​​ေတြရဲ႕​ေဖ်ာ္​​ေျဖမႈ​ေတြကိုပါတင္​ဆက္​ျပသ​ေလ့႐ွိပါတယ္​။ ဒီႏွစ္​မွာလည္​း​မိုး​ေဟကို၊ ​ေအာင္​ရဲလင္​း၊ အြန္​ဆိုင္​းတုိ႔အပါအ၀င္​ ျမန္​မာႏိုင္​ငံရဲ႕နာမည္​ႀကီး​သ႐ုပ္​​ေဆာင္​​ေမာ္​ဒယ္​​ေတြက ျပည္​တြင္​းျပည္​ပဖက္႐ွင္​ဒီဇိုင္​နာ...